Allgedo.com » 2017 » March » 11
Home » Archive Daily March 11th, 2017
Jabhadd mucaarad ah oo ku kacsan dowladda Koonfurta-Suudaan SPLA-IO ayaa caddaysay inay nolosha ku qabteen laba injineer oo u dhashay dalka India. Waxaa labadaa nin laga qafaashay goob shidaalka laga soo saaro oo ku taala koonfurta Guelguk ee webiga Nile-ka sare, markii dagaal kulul uu dhexmaray jabhadda & ciidamada dowladda. Afhayeenka jabhadda, kornayl William Gatjiath Deng ayaa sheegay...
Madax ka tirsan dhowr waddan oo Europe ku yaala ayaa diiday in isku-soobax lagu taageerayo siyaasiyiinta Turkiga ee aftida u raadinaya in dastuurka dalka wax laga baddalo. Duqa magaalada Rotterdam ee dalka Holland ayaa yiri “Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkey Mevlut Cavusoglu kuma qaban karo wax isku soo bax ah Hoolka weyn ee ku yaalla dekedda Rottendam sababo ammaanka khuseeya awgood.” Waddamada...
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Dr Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa soo dhaweeyey ansixintii golaha wasiirrada cusub ee Hirshabeelle ee uu dhowaan Soo magacaabay. iyadoo baarlamaanka Hirshabeelle talaabada horumarka leh ay codka kalsoonida ku siiyeen Golaha wasiirada uu ku ammaanay. Baarlamaanka ayaa maanta u codeeyay si aqlabiyad ahna ku ansixiyay xukuumada cusub ee uu...
Magaalada Durban ee dalka Koonfur-Afrika ayaa gaari lagu afduubtay gabar yar oo hal-bil jirta markii laba nin ay soo weerareen gaariga oo markaas ay darwal ka ahayd hooyadii dhashay ilmaha, waxaa kaloo la saarnaa ilmo kale oo 8-sano jir ah. Gaariga noociisa wuxuu ahaa Toyota Yaris, waxaa goor dambe laga helay meel waqooyiga ka xigta magaalada Durban oo cidla ah, laakiin waxaa la la’yahay...
Nigeria oo laga cabanayo isticmaalka shidaal sumaysan oo xanuunno sababay
Dalka Nigeria waxaa ka taagan cudurro ka dhashay shidaalka baabuurta uu waddankaasi kasoo iibsado Europe, halka Nigeria ay shidaal-ceeriin oo tayo sare leh u iibgeyso suuqyada Europe. Caasimadda Legos ee dalka Nigeria qiiqa kasoo baxa gawaarida wuxuu sababi karaa geeri. Shidaalka laga keeno Europe ee qaaradda Afica loo beec geeyo waxaa ku jirta maaddo la yiraahdo Sulphure, wuxuu 300 oo jeer...
Shirkadda Dahabshiil oo deeq Raashin ah gaarsiisey Barakacayaasha Abaaraha ee degan Duleedka Baardheere (Sawiro)
Shirkada Dahabshiil Xafiiskeeda Baardheere ayaa maanta waxay deeqraashin ah ay gaasiiyeen Boqolaal qoys oo Barakacayaal ah, degana duleedka Magaalada Baardheere kana kala yimid deegaano ka kala tirsan Gobolada Gedo, Bay iyo J/Dhexe, kuwaasi oo bilahii u dambeeyey ka cabanayey daruufo xaga nolosha ah. Gargaarka raashineed ee la siiyey Qoysaskan ayaa isugu irey Bariis iyoSaliid, Dadka la siiyey...